Tartanka Dugsiyada Sarre ee Gool FM Cup oo Furmay+SAWIRRO – Gool FM
Tartanka Dugsiyada Sarre ee Gool FM Cup oo Furmay+SAWIRRO
jilacow February 25, 2019
(Muqdisho ) 25 Feb 2019. Garoonka Salaxa ah ee degmada Xamar Jab Jab waxaa ka furmay tartanka dugsiyada sarre oo loogu magac daray Gool FM Cup.
Koobkaan waxaa maal galineysa Jaamacadda Salaam, iyadoo ay ka qeyb qaadanayaan 32 Iskuul.
Furitaanka Tartanka waxaa ka soo qeyb galay masuuliyiin kala duwan oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Cabdirixmaan Cumar Cusmaan ( Eng. Yarisow) guddoomiye ku-xigeenka Arrimaha Bulshada gobolka Marwo Basmo Caamir Shakeeti, guddoomiyaha degmada martida loo ahaa ee Ismaaciil Oronjo, C/xakiin Dhaga-Juun iyo Mahad Cilmi oo iyaguna ah guddoomiyaasha Hodan iyo Waabari, guddoomiyaha Isboortiga gobolka Mudane Xasan Wiish, Agaasimaha ugu sarreeya Goobjoog Media Group Xasan Maxamuud Maxamed, masuuliyiin ka socota Jaamacadda Salaam iyo marti sharaf kale ayaa ku sugnaa garoonka.
Ugu Horeyn waxaa goobta ka hadlay Aggaasimaha Gool FM C/laahi Daahir Siyaad Dhakoos wuxuuna u mahad celiyay masuuliyiinta kala duwan ee ka soo qeyb gashay furitaanka tatanka oo uu hoggaaminayo Duqa Muqdisho, isagoo dhanka kale mahad gaar ah u jeediyay Guddoomiyaha Degmada Xamar Jab Jab ismaaciil Oranjo oo ogolaaday in tartanka lagu ciyaaro degmada uu guddoomiyaha ka yahay.
“Gool FM oo fiirineysa jaceelka dhalintu ay u qabaan kubadda cagta iyo in Iskuulada dhamaan ay is dhex-galaan isna bartaan ayaa inagu qasabtay in tartankaan aan u qabano dugsiyada ku yaala caasimadda Muqdisho ayuu ku waramay agaasime C/laahi Daahir Siyaad Dhakoos.
Gudoomiyaha isboortiga gobolka Xasan Wiish ayaa isna Yiri” Waa farxad weyn in Gool FM iyo jaamacadda Salaam ay kaalin weyn ka qaadanayaan hormarka Isboortiga gobolka Banaadir.
Ugu dambeyn guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Muqdisho Mudane Cabdirixmaan Cumar Cusmaan ( Eng. Yarisow) ayaa si gaar ah ugu mahad celiyay kaalinta muuqata ee Gool FM oo ay mar walba u garab taagan tahay Isboortiga Caasimadda, isagoo sidoo kale ku amaanay doorka Jamaacadda Salaam ay ka qaadaneyso tartankaan, waxa uuna ugu dambeyn furay tartanka dugsiyada sarre ee Gool FM Cup.
Sikastaba tartanka waxaa ka qeyb qaadanaya 32 iskuul oo ku yaala Muqdisho,waxaana iska kaashanaya Goobjoog Media Group iyo Jaamacadda Salaam.
“Kama baqeyno Messi kulanka El Clásico”
Tababare Solskjær oo weerar ku qaaday xidigaha Liverpool, sababa la xiriira Rashford